चिनी प्लमहरूको मोश | Martech Zone
चिनी प्लमहरूको मोश
सोमबार, अक्टोबर 9, 2006 सोमबार, अगस्ट 24, 2009 Douglas Karr
म आज राती एक आवश्यक ब्रेक लिदै छु। म सीधा हप्ता को लागी काम गरीरहेको छु र यसले मलाई समातिरहेको छ
मलाई मेरो ब्लगमा अपडेट लेख्न मनपर्दैन, त्यहाँ सधैं केहि त्यस्तो चीजहरू छन् जुन म प्रत्येक दिन जान्छु जुन मलाई साझेदारीको आनन्द लाग्छ। मैले आफ्नो विचारहरू लेखिसकेको छु Youtube बिक्री, यस्तो देखिन्छ कि सही भयो!
मैले भन्नु पर्दछ कि आज मेरो आधा फिडहरू बिक्री सन्देश रहेको देख्दा निराश भयो। के यो वास्तवमै महत्त्वपूर्ण छ? यो निश्चित छ कि यो धेरै पैसा हो ... तर किन ओहस र अह्स?
जे भए पनि, मेरो छोराले चिनी प्लम्सको नृत्यसँग रमाइलो गर्यो र म तपाइँसँग यसलाई साझा गर्न चाहान्छु! उनले पक्कै पनि यो लेखेका थिएनन ... तर उसले यसलाई आफ्नै बनायो, प्रत्येक लेयर खेल्दै आफैंमा मिक्स गर्‍यो। रमाईलो गर्नुहोस्!
बिलको भ्रमण गर्नुहोस् साइट उसको अन्य 'क्लासिक्स' सुन्न!
छविहरूको साथ तपाईंको फिड भिन्न गर्नुहोस्
क्र्यास ... कुनै foo-foo कृपया।
तिमी मेरो नायक हौ, बुबा!
मँ तपाईको ब्लगको बारेमा कुरा गरिरहेको थिइनँ… यो मैले पढेको फिड्स मध्ये १ 100० मध्ये १०० हुन सक्छ गुगल समाचार। अत्यन्त नराम्रो कोहीले अ on्ग्रेजीमा आधारित समाचार पाठकहरूको लागि 'डिडुप्लिकेटर' निर्माण गर्न सकेन!
Google मा तपाईंको लिंकको साथ, म तपाईंलाई आशा गर्दछु। यो सबै प्राविधिक साइटहरू हुन् जुन यो पोस्ट गर्‍यो जुन मलाई नट ड्राइभ गर्दै थियो!